» कोरोना भाइरस अनुसन्धानमा सुखद् खबरः चीनमा गरिएको भ्याक्सिन परीक्षण देखियो प्रभावकारी
कोरोना भाइरस अनुसन्धानमा सुखद् खबरः चीनमा गरिएको भ्याक्सिन परीक्षण देखियो प्रभावकारी
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार १५:०५
काठमाडौं। कोभिड-१९ को कहर संसारभरी बढ्दै जाँदा यसको भ्याक्सिनको आविष्‍कार प्रयत्न पनि भइरहेछ। विभिन्‍न देशमा वैज्ञानिकहरू भ्याक्सिनको खोजमा लागिपरेका छन्। यसैबीच चीनमा गरिएको एउटा भ्याक्सिनको परीक्षणको नतिजा आशाप्रद देखिएको ९ वैशाखमा प्रकाशित शोध आलेखमा जनाइएको छ।
‘ल्यान्सेट’ जर्नलमा प्रकाशित शोध आलेखअनुसार शुरुआती परीक्षण विभिन्‍न प्रयोगशालामा १८ देखि ६० वर्षसम्मका १०८ जना स्वयंसेवकहरूमा गरिएको थियो। उनीहरूमा भ्याक्सिनको एक डोजले नै दुई हप्ताभित्र ‘टी सेल्स’ भनिने प्रतिरक्षा कोषहरू उत्पादन भएको देखियो।
“यो सुखद् तथ्यांक हो, तर निकै नै शुरुआती पनि हो,” यो प्रयोगमा सहभागी नभएका बोस्टनको ‘बेथ इजरायल डेकोन्स मेडिकल सेन्टर’का निर्देशक डा. डन ब्यारुच भन्छन्, “समग्रमा यो खुशीको खबर हो।”
यो प्रयोग भ्याक्सिनको प्रभावकारिताको पहिलो परीक्षण हो। अहिले यो भ्याक्सिन सुरक्षित छ भनेर पुष्‍टि हुन बाँकी नै छ। भ्याक्सिनको प्रभावकारिता प्रमाणित हुनका लागि भने हजारौं र आवश्यक परे लाखौं व्यक्तिमा परीक्षण हुनुपर्छ।
नोबल कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनलाई सबैजसो देशको अर्थतन्त्र सञ्‍चालनमा ल्याउने र सामान्य जीवनमा फर्किने समाधानका रूपमा लिइएको छ। त्यसैले संसारैभर वैज्ञानिक समूहहरू लागिपरेका छन्।
औषधि अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने संस्था ‘मोडर्ना’ले ५ जेठमा आफूले निर्माण गरेको भ्याक्सिन सुरक्षित र प्रभावकारी भएको बताएको थियो। उसले ८ जनामा त्यसको परीक्षण गरेको थियो। त्यस्तै ७ जेठमा डा. ब्यारुच र उनको समूहले आफूले आविष्‍कार गरेको भ्याक्सिनले बाँदरहरूलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित बनाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।
चीनमा गरिएको यो अनुसन्धानमा ‘एड ५’ (एडेनोभाइरस ५) भन्‍ने भाइरसबाट भ्याक्सिन उत्पादन गरिएको बताइएको छ। आनुवंशिक सूचना मानव कोषसम्म पुर्‍याउन यो भाइरसको परिमार्जन गरिएको थियो।
यो भाइरसको प्रवेश भएपछि मानव कोषले कोरोना भाइरस प्रोटिन बनाउन शुरु गर्छ। प्रतिरक्षा प्रणालीले त्यो प्रोटिन चिन्‍न सिक्छ र आक्रमण गर्छ। जसबाट शरीरमा कोरोना भाइरसविरोधी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हुन्छ।
तर ‘एड ५’ पहिले नै धेरैमा देखा परिसकेको भाइरस हो। परीक्षण गरिएका आधाजति सहभागीमा यो भाइरसविरुद्ध पहिले नै शक्तिशाली एन्टिबडिज उत्पादन गरिएको थियो।
चीनका अनुसन्धानकर्मीहरूले ‘एड ५’ एन्टिबडिज भएका व्यक्तिहरूमा भ्याक्सिनको बलियो प्रतिरक्षा प्रणाली विकास हुन नसकेको फेला पारेका छन्।
“यसले यो भ्याक्सिनको उपयोगिता सीमित गराउन सक्छ,” बेलर कलेज अफ् मेडिसिनको ‘नेसनल स्कुल अफ ट्रपिकल मेडिसिन’का डिन डा. पिटर होटेज भन्छन्, “भ्याक्सिनहरूको तुलना गर्ने हो भने एडेनोभाइरस सबैभन्दा न्यून सम्भावना भएकोमध्येमा पर्छ।”
वैज्ञानिकहरूका अरू समूह पनि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन विकास गर्न एडेनो भाइरसको प्रयोगतिर लागेका थिए। तर उनीहरूले यो भाइरसको खासै प्रभावमा नरहेका स्ट्रेन प्रयोग गरेका छन् (भाइरसमा आनुवंशिक फरक भएपछि स्ट्रेन भनिन्छ, यसलाई एउटै समूहका फरक-फरक प्रकार भन्‍न सकिन्छ)। ‘एड २६ भ्याक्सिन’ बाट भ्याक्सिन निकाल्ने खोज गरिरहेका डा. ब्यारुचले आफ्नो समूहले अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एशियामा गरेको परीक्षणमा उक्त भाइरसविरुद्ध एन्टिबडिज उत्पादन नगरेको पाएको बताए।
चीनमा गरिएको परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिहरूको सानो अंशमा मात्रै कोरोना भाइरसलाई निर्मूल गर्ने एन्टिबडिज विकास भएको छ।
४५ देखि ६० वर्षका व्यक्तिहरूमा कमजोर प्रकारको प्रतिरक्षा प्रणाली विकास भएको पाइएको छ। ६० वर्षमाथिका व्यक्तिमा भने अझ प्रतिरक्षा प्रणाली अझ कमजोर हुने डा. लाइकेको मत छ। “उनीहरूले परीक्षण गर्न बाँकी महत्वपूर्ण उमेर समूह छ,” उनले भनिन्।
चीनमा भएको परीक्षण सुखद् भए पनि यसका नतिजाहरू सानो समयावधिमा गरिएको अनुसन्धानमा आधारित छन्। भ्याक्सिनको प्रभाव कतिन्जेल रहन्छ भन्‍ने पनि पुष्‍टि भएको छैन।
अनुसन्धानकर्मीहरूले तीन डोजको प्रयोग गरेका थिए। उनीहरू सबैभन्दा माथिल्लो डोज बढी प्रभावकारी भएको बताउँछन्।
भ्याक्सिन परीक्षण गरिएका व्यक्तिमध्ये ८० प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको असर (साइड इफेक्ट) पनि देखिएको छ। सुई लगाएको ठाउँमा दुख्नेबाहेक आधाजसोमा ज्वरो आउने, थकान महसुस हुने, टाउको दुख्ने भएको छ भने पाँचमध्ये एकमा मांसपेशी दुख्ने भएको छ।
संसारभरका अनुसन्धानकर्मीहरूले चिनियाँ अनुसन्धाताले संसारैभरका वैज्ञानिकलाई समीक्षाका लागि आफ्ना सबै तथ्यांक प्रकाशन गरिदिएकोमा प्रशसा गरेका छन्।
“हामीलाई के आशा छ भने, एउटा मात्र होइन, धेरै भ्याक्सिनहरू स्वीकृत गर्नुपर्ने हुनसक्छ,” डा. ब्यारुच भन्छन्, “संसारलाई धेरै प्रकारका भ्याक्सिन चाहिएको छ।”
‘द न्युयोर्क टाइम्स’बाट